Kayseri (; ; Ku dhawaaqa Af-Turki: [ˈkajseɾi]; mararka qaar loo yaqaano Qayseri) waa magaalo ku taalo bartamaha wadanka Turkiga waana caasimadda gobolka Kayseri, waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn dalkaasi islamarkaana ugu hormarsan haday noqoto dhaqaale, warshaddo, waxbarasho iyo waliba xagga dalxiiska oo ay Kayseri caanku tahay gaar ahaan booqashoyinka dhaqanka iyo arimaha taariikhiga ah.
Kor kasoo bilow: Garoonka Kubadda Cagta ee Kadir Has, Bidix Dhexe Qaybta 2aad: Jidka Sivas, Midig Dhexe Qaybta 2aad: Taalada Atatürk iyo Darbiga Qadiimiga ah ee Kayseri, Dhexda Qaybta 3aad: Faras Magaalaha Kayseri iyo Darjiinaha Oto, Bidix Hoose: Qalcadda Kayseri, Midig Hoose: Tram-yada Kayseray ee Magaalada u kala goosha.
3000 C.H (5022 sano)
1515 (506 sano)
: Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi
• Magaalada Kayseri
Kayseri waxaa mara wabiga Zamanti, sidoo kale waxaa ku taal buurta Erciyes oo ah buur-barafeed dalxiisayaashu aad u jecelyihiin. waana magaalada uu kasoo jeedo madaxweynahii hore ee Turkiga mudane Abdullahi Gul.
1.1 Magacyadii Hore ee Magaalada
1.2 Taariikhda Kayseri
6 Qaabdhismeedka Magaalada
7 Magaalooyinka la mataanka ah
Weel sharaxan oo Xaytiyiintii isticmaali jireen oo Kayseri laga helay
Magacyadii Hore ee MagaaladaEdit
Magacyada taariikhiga ah ee loo aqoon jiray magaalada Kayseri intii ay soo jirtay waxaa ka mid ah: Mazaca, Strabo, Eusebia oo loogu magacdaray Ariarathes Eusebes Philopatorkii 5aad oo ahaa boqorkii Kabadokiya qarnigii 130C.H muddo ka dib waxaa la oran jiray magaca Caesarea oo ah dhawaaq u dhaw magaca casriga ee magaalada hadda loo yaqaano, waana magac sharafeed lagu samiyey Kadib markii uu geeriyooday aasaasihii Imbaraadooriyaddii Romanka ee Caesar Augustus sanadku markuu ahaa 14kii C.D, waana waqtigaa marka sida rasmiga ah ay ula wareegtay Imbaraadooriyaddii Romanka xukunka magaalada. Magacaasoo markii dambe isu bedelay Kaisariyah kadib markii Islaamku furtay magaalada sanaddii 647C.D.
Magaalada Kayseri waxay dhisantay ama camirantay sida ku cad athar ama raadad taariikheed oo ay cilmi baadhe yaashu ka heleen deegaanka Kültepe in sanadku markuu ahaa 3000 C.H (5022 sano ka hor) ay magaaladu barwaaqowday (waxaa dhici kara in aasaaskeedu intaa ka horeeyey). Waxaana aasaasay oo ay caasimad u ahayd Xaytiyiintii hore ayagoo u bixiyey magaca; Mazaka ama Mazaca , waqtigaasoo magaaladu ay ahayd mid muhiim u ah isu socodka ganacsiga iyo badeecooyinka dunida oo dhan, khaasatan waxay xarun ama suuqa ugu weyn u ahayd Marin-Ganacsiyeedkii la oran jiray Wadada Xariirta oo muhiim u ahaa ganacsiga qaaradaha Aasiya iyo Yurub.
Magaaladan waa mid barwaaqo sooran ah waxa ayna caan ku tahay dhanka warshadaha waxaana ku yaalo warshado dhowr boqol kor u dhaafaya oo soo saara dhamaan badeecooyinka kala duwan, sida dharka, rooggaga, shamiintada, elektirooniga, qalabka dhismaha, qalabka baabuurta, agabka guryaha iyo xafiisyada iyo kuwo kale. dhamaan badeecooyinkaasi kala duwan waxaa loo iibgeeyaa suuqyada gudaha iyo kuwa caalamka.
Kayseri waxaa ku yaala gagida dayuuradaha caalamiga ee Erkilet International Airport waana mid ka mida garoomada ugu mashquulka badan dalkaasi. waxaa dalka intiisa kale ku xira khadka tareenka dheereeya sidoo kale magaaladu gudaheeda waxaa ka shaqeeya trams lagu magacaabo Kayseray.
Waxaa ka dhisan labo kooxood oo ka dheela heerka 1aad ee horyaalka kubadda cagta Super Lig ee Turkiga waxaana lakala dhaha; Kayserispor iyo Kayseri Erciyesspor waxa ayna ku dheelaan garoonkooda Kadir Has oo qaada inka badan 33000 taageero yaal garoonkaasoo xariga laga jaray 2009kii, Kayseri waxay kaloo leedahay kooxo kubada kolayga, golfka, tenniska ah iyo waliba qaar kale.
Magaalada waxay kaloo caan ku tahay ciyaaraha barafka iyo tartanka baaskiiladda.
Jaamacadda Erciyes waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn guud ahaan Turkiga waxaana lagu bartaa culuumta kala duwan gabi ahaantood, waxaana dhigta in ka badan 50000 arday oo ay ka mid yihiin arday soomali ah oo dalkaas deeq waxbarasho siiyey, sidoo kale waxaa ku ayaala seddex jaamacadood oo kale magacyadooduna kala yahiin: Jaamacadda Abdullah Gül, Jaamacadda Melikşah iyo Jaamacadda Nuh Naci Yazgan.
Muuqaalka bartamaha magaalada Kayseri ee wadanka Turkiga.
Magaalooyinka la mataanka ahEdit
Magaalooyinka Kayseri ay mataanka latahay waxaa ka mid ah:
Koonfur Kuuriya Yongin
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Kayseri&oldid=192135"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 25 May 2019, marka ee eheed 23:25.